FANAFIHAN-DAHALO TANY MORAFENOBE : « Ahiahiana ny hisian’ny firaisana tsikombakomba tamin’ny zandary » | NewsMada
Ireo mpikambana ao amin’ny Madaomby izay nanao fanambarana.
Isan’andro, efa voaresaka matetika ny fihoaram-pefy ataon’ny mpitandro filaminana. Andro vitsy lasa izay, olona iray, voalaza fa tsy salama saina no maty novonoin’ny zandary iray tany Mampikony. Amin’izao indray, novakian’ny kaoperativa « Madaomby » bantsilana ny fomba ratsy fanaon’ny zandary…
Ny herinandro lasa teo, nisiana halatr’omby manodidina ny 200 tany Horimbato, distrikan’i Morafenobe. Mampiahiahy ny firaisana tsikombakomban’ireo mpangalatr’omby tamin’ny zandary tamin’izany. Raha fehezina, tsy azo lazaina ho kolikoly intsony ny zava-nitranga fa efa azo heverina ho ny mihoatra izany aza. Toy izao ny zava-nisy, ny harivan’ny alakamisy lasa teo, tokony ho tamin’ny 5 ora sy sasany, nanao fisafoana ireo omby nentina tamin’ny kamiao avy any amin’ny faritra Melaky ny zandary. Araka ny fitantaran’ireo mpitondra kamiao ireo, voalaza fa teren’ireo mpitandro filaminana handoa 2000ariary isan’omby ireo mpandraharaha amin’izany. Tamin’ity farany ity anefa, nahazo baiko avy any amin’ny kaoperativa ireo mpitondra kamiao tsy hanome vola ireo zandary ireo intsony, ary teo no nanomboka ny zavatra rehetra. “Nanao teny fandrahonana ireo mpitondra omby taorian’izay ireo mpitandro filaminana ireo ary ora iray taorian’izay no niseho ny fandrobana nataon’ireo dahalo. Araka izany, mampiahiahy ny firaisana tsikombakomban’ireo dahalo miaraka amin’izy ireo. Raha ny fiheveranay azy aza dia izy ireo mihitsy no nampandre ny dahalo mba hanafika ireo mpitondra omby satria tsy nety nandoa ny vola nangatahan’izy ireo”, hoy Sambehafa Tahiry, filohan’ny filan-kevi-pitantanana ny kaoperativa Madaomby. “Ankoatra ny “puce” nampiasain’ireo dahalo latsaka teo amin’ny tany sy ny basy kalachnikov nentin’izy ireo. Avy aiza ireo basy ireo?”, hoy ihany ity tompon’andraikitry ny kaoperativa Madaomby ity.
Manao antso avo
Araka izany, nanao antso avo tamin’ny tompon’andraikitra teo anivon’ny zandarimariam-pirenena araka izany ireo mpandraharaha miasa amin’ity sehatra ity, miainga any amin’ny mpiompy, ny mpivarotra, ny mpividy ary ireo lehibe any amin’ny toerana famonoana omby, mba hijery akaiky ny olana lalovan’izy ireo eny an-dàlana, izany hoe miainga any Melaky hatrany Tsiroanomandidy. « Raha ny tokony ho izy, tokony tsy haka vola ireo zandary na ny ariary aza, satria tsy manome alàlana azy ireo amin’izany ny lalàna. Rahonana hidina anefa ireo omby raha toa ka mandà tsy hanome ny vola takian’izy ireo izahay, 1000 ariary hatramin’ny 2000 ariary isaky ny omby », hoy ihany ity tompon’andraikitra ity. Araka ny nambarany, tsy misy tokony hanaovan’izy ireo kolikoly amin’ny zandary satria ara-dalàna avokoa ny taratasin’ireo omby rehetra entin’izy ireo. Izay no antony hanaovan’izy ireo antso avo amin’ny tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny zandarimariam-pirenena mba handraisana fepetra amin’ireo zandary « mandika lalàna » ireo. Io fakana vola io izay fantatra fa loza mitatao amin’ity sehatra iray ity satria, araka ny voalazan’izy ireo hatrany, dia antony tsy mandrisika ny olona hiasa amin’ny lafiny fiompiana izany.
Miandry fandraisana andraikitra
Raha tsiahivina, ireo tompon’andraikitra ambony nifanesy teo anivon’ny zandarimariam-pirenena dia efa samy nampanantena fa hanadio ity fianakaviamben’ny zandary ity. Tsiahivina manokana eto ny fanambarana nataon’ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria teo aloha hoe « tsy natao ho fiafenan’ny mpamono olona sy ny tsy mpanara-dalàna ny zandarimaria », io fanehoan-kevitra io izay nataony taorian’ny fihoaram-pefy nataona zandary iray, izay namono nahafaty olon-tsotra, tamin’ny lalana hivoaka an’Antsirabe, tamin’ny septambra 2016. Raha tsiahivina ihany koa, nanambara ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria vaovao, ny jeneraly Randriamahavalisoa Girard, fa hamerina indray ny hasin’ny zandarimariam-pirenena, ny 24 aprily lasa teo, taorian’ny famindram-pahefana nataony. Hatreto anefa, mbola tsy nisy fandraisan’andraikitra, ary mbola miandry izany ny rehetra. Raharaha maro no mbola miandry fanazavana, ankoatra ny zava-nitranga tany Mampikony, sy ity tany Fenoarivobe ity. Teo ihany koa ny mikasika ny tsy fandraisana andraikitry ny zandarimariam-pirenena ka nahatonga ny fitsoahan’ny senatera Andriamandavy Riana VII, izay niteraka resa-be. Hatreto, mbola maro ireo mieritreritra azy ho ambonin’ny lalàna, ary miandrandra lalandava ny fiarovan’ireo olona amboniny.